Usoro Nazca: gini ka ha bụ, njirimara, mbido na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n’ime ihe ịtụnanya ọgụgụ n’uwa ụwa niile gara bụ Ahịrị Nazca. Ndị a bụ geoglyphs ochie nke dị na ngalaba Ica nke Peruvian. Ekepụtara geoglyph ndị a site n'ọdịbendị tupu Columbian Nazca bụ nke mepụtara n'etiti narị afọ nke mbụ na nke asaa AD. N'oge a anyị nwere ọdịnala a nke kwụpụtara maka inwe ihe nnọchianya a pịrị apị na seramiki na nkume na n'elu ala n'onwe ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara usoro Nazca na akụkọ ihe mere eme ha.
1 Kedu ihe bụ usoro nazca
2 Nchọpụta na akụkọ ihe mere eme
3 Nchọpụta nke usoro Nazca
4 Akpa geoglyphs
Kedu ihe bụ usoro nazca
A maara aha ọzara ndị dị n'ebe ndị a site na aha pampas. Ha dị na obodo Nazca na Palpa ma bụrụ ndị amaara ama n'ụwa niile maka ịnwe ọnụọgụ ọgụgụ buru ibu na mbara ọzara. Ihe ngosi kwuru na-akpọ teknụzụ geoglyphs. Mgbe anyị na-ekwu maka geoglyphs anyị na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ e wuru na mbara ala ma ọ bụ na mkpọda.
Usoro ndị a na-anọchi anya osisi na anụmanụ yana ụfọdụ ụdị geometric dịka gburugburu, trapezoid, triangles na zigzags, na ndị ọzọ. Ogologo usoro Nazca na-adịkarị iche. Ebe ụfọdụ n’ime ha buru oke ibu, anyị enweghị ike ịmatacha ha ma ọ bụrụ na anyị esi n’ala na-ele ha. Naanị n'ụsọ mmiri Peruvian achọtara ebe iri anọ nwere geoglyphs. Nke a bụ otu n'ime ihe nnọchianya kachasị mkpa tupu oge Hispaniki n'akụkọ ihe mere eme.
Eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ebe na geoglyphs na-egosi na iji ihe ngosi nka ndị a bụ ihe a na-ahụkarị na nke zuru oke n'etiti ọdịnala oge ochie Andean. Edere ihe osise nke ahịrị Nazca ahụ n'ọnọdụ dị mma ebe ọ bụ na ebe e mere ha bụ mpaghara nwere oke ikuku. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ndị a geoglyphs ụzọ ụfọdụ ejirila aka n'ihi ebe ndị na-agagharị na ndị njem bịara. Usoro ndị a na-efunahụ ụfọdụ ọmarịcha ha site na usoro oxidation nke ọzara.
Nchọpụta na akụkọ ihe mere eme
A na-echebe usoro ndị a site na iwu nke Peru ma na-ahụta dị ka Ihe Nketa Omenala nke Mmadu. Ọchịchị nchebe a dị elu bụ ọrụ maka igbochi ntinye ndị mmadụ na mpaghara ndị a iji gbochie mmebi na mgbanwe nke ụdị. N'ihi ọmụmụ ndị malitere na narị afọ nke iri abụọ, e guzobere na ọdịbendị Nazca bidoro n'ihe dị ka afọ 200. Ndị ọkachamara jisiri ike kwenye na n'ime ọdịbendị a enweela oge mgbanwe ụfọdụ nke ọdịbendị ndị ọzọ emetụtala. Nke a bụ otu anyị si kee ọdịbendị Nazca ụzọ atọ: Early Nazca (50-300 AD), Middle Nazca (300-450 AD) na Late Nazca (450-650 AD).
A maara na ọdịbendị a na-ebute ọdịbendị Paracas n'afọ ndị ọzọ. Ndị ọkachamara elekwasị anya na mbọ ha na ịmụ nyocha na ọdịbendị nke Nazca kwuru na ọ bụghị ihe mbugharị nke ndị agbata obi ndị ọzọ. Nkọwapụta nke geoglyphs a bụ njedebe nke usoro sara mbara nke mmepe ọdịbendị na mpaghara Andean niile.
Dum ebe Geoglyphs gbasaa bụ ọzara ma daba na ọzara Atacama. Ọ bụ otu n’ime ebe kpọrọ nkụ n’ụwa. N'ihi ya, enwere ike igosipụta na ọdịdị ala nke mpaghara ahụ nwere ọtụtụ ọdịdị ala. N'otu aka, anyị nwere mbara ọzara sara mbara nke nwere ihe ndị na-edozi ahụ nke na-edebe kemgbe ọtụtụ afọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụdị ọdịdị ala ọzọ nke anyị na-ahụ ndagwurugwu nwere ala na-eme nri nke na-arụ ọrụ dị ka mkpọ mmiri n'ime oke ala ndị a.
Nchọpụta nke usoro Nazca
N'ihi ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ndị a chọtara, ndị ọkachamara achọpụtala na Nazcas ga-enwe ezigbo ahụ ike. Otú ọ dị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha nwụrụ site n'ọrịa na ụkwara nta. N'agbanyeghị na ndị ahụ dị ezigbo mma, ndu waszurẹlu dụ mkpụkpu. O nweghi mgbe ndị gbara afọ iri anọ. Iji guzobe ozi ndị ọzọ gbasara omenaala a, ahụla ili dị iche iche nwere agwa dị iche iche na onyinye dị iche iche. Nke a na-enye anyị ohere ikwenye na ọdịbendị Nazca nwere ọdịiche siri ike nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Obodo a ewughi ụdị mgbidi ọ bụla ma ọ bụ nchebe ọ bụla, ya mere, ọ na-apụta na a gaghị enwe ụdị agha ọ bụla, kama na ha biri n'udo. E ji quincha, ahịhịa na osisi rụọ ụlọ ndị ahụ.
N'ebe a hụrụ ahịrị ndị Nazca anyị nwere ụfọdụ ọdịdị dị nsọ. Ọ bụkwa na ndị njem nke ụgbọ elu ahụ n'afọ 1930 malitere ịchọpụta ụdị ihe omimi ndị a bụ nkịta, enwe na hummingbirds, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ebe a ka amụrụ ihe omimi nke usoro Nazca. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ ebe mara mma njem nleta.
E chebere geoglyphs n'ihi iru mmiri dị ala n'ọzara, nke na-emepụta obere mbuze. Anyị maara na ndị na-ahụ maka ọdịdị ala nke na-emebi ebe ndị ahụ bụ ifufe na mmiri. Oke ikuku dị na mbara ọzara Atacama, mana ha adabaghị. Ma ọ bụ na ebili mmiri ndị a dị ọcha ma wepụ ájá nke a na-etinye na nkume, ha na-eme ọbụna ka geoglyphs nwere ike ịhụ nke ọma.
The mbụ geoglyphs na a dọtara ejiri mara ha dika ihe osise nke mmadu, anumanu na ndi ozo di iche. Eleghị anya, ejiri ọnụ ọgụgụ ndị a niile mee ihe dị ka ụdị ụzọ jikọtara mpaghara ugwu na mpaghara ndịda. Na mpaghara ugwu, achọtala ụlọ nke ọtụtụ ụlọ ndị e wuru n'elu ahịrị. Nke a nwere ike igosi na ọdịnala ndị Nazca n'onwe ha enyeghị usoro ndị a dị mkpa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere usoro Nazca na akụkọ ihe mere eme ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Usoro Nazca